Maungtintyin: ငြိမ်းချမ်းရေး အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ် ပေးပါ , စစ်သို့ မသွားပါနဲ့
ငြိမ်းချမ်းရေး အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ် ပေးပါ , စစ်သို့ မသွားပါနဲ့
သည်းမခံနိုင်မှုဟာ ကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်သို့ ရောက်ရှိသွားတဲ့အခါ၊ စစ်မက်အတွက် အကြောင်းပြချက်များဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးရဲ့မွန်မြတ်သန့်စင်မှုထက် ပိုမိုကြီးကျယ်လာတဲ့အခါ အဲဒီလိုအခါများမှာ စစ်ပွဲများ ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ အသက်ရှင်နေထိုင်ရခြင်းရဲ့ တန်ဖိုးကို သိနားလည်မှုများ ပျက်ပြားဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါ ဒီအခါများမှာ စစ်ပွဲများ ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို သယ်ဆောင်ဖြန့်ဖြူးဖို့ ကြိုးစားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လဲ ဒါဟာ အဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာ ကိစ္စတစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါ။ စစ်ပွဲများကို စတင်တဲ့ လူသားသတ္တ၀ါများရဲ့ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ပွဲတစ်ခုဟာ ပြင်ပမှာ စတင်ခြင်းမတိုင်းမီ အတွင်းမှာ စတင်ပါတယ်။
အတွင်းကစစ်ပွဲဟာ အန္တရာယ် များလွန်းပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ အဲဒါဟာ လုံးလုံးမငြှိမ်သက်နိုင်တဲ့ မီးတစ်ခု ဖြစ်နေလို့ပါ။ အတွင်းမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို တိုက်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရခြင်း မရှိကြတဲ့အတွက် စစ်ပွဲများစွာ တိုက်ခိုက်နေကြပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ အဲဒါကို ဖွင့်ဟဖို့ လမ်းဖွင့် ပေးမထားလို့ပါ။
အကျွန်ုပ်တို့ဟာ တစ်စုံတစ်ခုကို ရှာဖွေနေပါတယ်။ ဒါကို အကျွန်ုပ်တို့က အောင်မြင်မှု၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရား၊ ဒါမှမဟုတ် ငြိမ်သက်မှုလို့ ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ မခြားနည်းတူအရာများ ဖြစ်ပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အကျွန်ုပ်တို့ အလိုရှိတဲ့အရာများကို ကောင်းစွာမသိရှိကြတဲ့အခါ အကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေတဲ့အရာများမှာ အမည်နာမ များစွာ ရှိလာပါတော့တယ်။
အကျွန်ုပ်တို့ လိုအပ်တဲ့အရာကို ရှာဖွေဖို့ အကျွန်ုပ်တို့ဝန်းကျင်ကို ကြည့်ရပါမယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ ရှာဖွေနေတဲ့အရာဟာ ဘယ်နေရာမှာ ရှာဖွေရမယ်ဆိုတာ သိရှိဖို့ ပထမဆုံးအနေနဲ့ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အဲဒါတွေ့ရှိနိုင်တဲ့နေရာကို ကိုယ်တိုင် စုံစမ်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အတွင်းကို ရှု့ကြည့်ဖို့ အကျွန်ုပ်တို့ စဉ်းစားပြီးပြီလား?
အသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်းဟာ လွယ်ကူတဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ရပ်တော့ မဟုတ်ပါ။ အထူးသဖြင့် အဲဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ အကောင်းဆုံးကို လိုချင်တယ်ဆိုယင်ပါ။ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အဲဒီအရာကို တူးဖော်ကြည့်ရပါမယ်။ တူးဖော်ကြည့်ခြင်းဟာ တကယ်တော့ ခက်ခဲပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ လိုအပ်တဲ့အရာများကို ထုတ်ယူပြီး ကျန်ရှိတဲ့ မလိုအပ်တာတွေကို ချန်ထားရပါမယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တူးဖော်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုယင် အကျွန်ုပ်တို့ဟာ တန်ဖို့ရှိတဲ့အရာများကို ရှာဖွေရယူပြီး တန်ဖိုးမဲ့ အရာများကိုတော့ စွန့်ပစ်ခဲ့ရပါမယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ ရှာဖွေနေတဲ့အရာများဟာ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ပြင်ပမှာ မဟုတ်ဘဲ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အတွင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ အမြဲတမ်းရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်သလို့ နောင်မှာလဲ တစ်လျှောက်လုံး ရှိနေဆဲ ဖြစ်မှာပါ။
တင့်တိမ်ရောင့်ရဲကျေနပ်မှုဟာ ကောင်းတယ်ဆိုပေမယ့် ဒါဟာ ရုတ်တရက်ဖြစ်လာတာ တစ်ခု မဟုတ်သလို ငြိမ်းချမ်းရေးက ကောင်းတယ်ဆိုရာမှာလည်း မတော်တဆ တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါ။ ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ ဤနေရာမှာပင် ရှိနှင့်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ လူသားသတ္တ၀ါအားလုံးရဲ့နှလုံးသားမှာ တည်မှီနေတဲ့အရာပါ။ ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ သုံးဆောင်ခံစားရမယ့်အရာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့မှာရှိတဲ့ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် တကယ်ထူးခြားတဲ့ပါဝါများစွာထဲက တစ်ခုကတော့ အကျွန်ုပ်တို့ ခံစားသုံးဆောင်နိုင်တဲ့အရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီခံစားသုံးဆောင်မယ့်ပါဝါရဲ့ရှေ့က ငြိမ်းချမ်းရေးကို နေရာတကျထားတဲ့အခါ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို သုံးဆောင်ခံစားရပါတယ်။ ကျေးဇူးတရား၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ စာနာနားလည်မှုများ ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဒီနေရာမှာပဲ ရှိပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အလွန်မှောင်မိုက်နေတဲ့ညမှာတောင် အရမ်းထွန်းလင်းတောက်ပတဲ့ မီးအိမ်ကို အတွင်းသို့ ကိုင်ဆောင်သယ်ယူလာပါတယ်။ အဲဒါဟာ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကမ္ဘာကို အလင်းရောင်နဲ့ ပြည့်အောင်ဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အဲဒီအလင်းရောင်ကို တွေ့ရှိဖို့ စောင့်မျော်နေပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ ကွဲပြားခြားနားအောင် မလုပ်ပါ။ အကျွန်ုပ်တို့ ချမ်းသာသည်ဖြစ်စေ၊ အကျွန်ုပ်တို့ ဆင်းရဲတယ် ဆိုပါစေ၊ ဒါမှမဟုတ် အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဘယ်ဘာသာတရားကိုတော့ ပိုင်ဆိုင်နေသည်ဆိုပါဦး အဲဒီငြိမ်းချမ်းရေးက အရေးစိုက်လိမ့်မယ် မဟုတ်ပါ။ အကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ ဘယ်တိုင်းပြည်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ငြိမ်းချမ်းရေးက ဂရုမစိုက်ပါဘူး။ ဆုံဆည်းရဖို့ ငြိမ်းချမ်းရေးက စောင့်မျော်နေပါတယ်။ စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ဘ၀များကို ခွဲခြားကန့်သတ်တဲ့ အကြောင်းကိစ္စ အားလုံးက နောက်တစ်ကြိမ် ဒါမှမဟုတ် ထပ်ကာထပ်ကာ တစ်ခုလုံးကို ခံစားသုံးဆောင်ရဖို့ စောင့်မျော်နေခြင်းကို သီးသန့်ခွဲခြားမပစ်ပါ။ နှလုံးသားမှာ ဒွန်တွဲမနေတော့တဲ့အခါ၊ အတွင်းမှာ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားခြင်းကို ဖြေရှင်းပြီးတဲ့အခါ အဲဒီအခါများမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ ဖြစ်လာပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ နှလုံးသားသို့ ရောက်ရှိလာတဲ့အခါ ကြည်လင်အေးချမ်းမှုက တစ်ပါတည်း လိုက်ပါလာပါတယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ အတွင်းမှာ ပြည့်လျှံလာပြီး အထိန်းအကွပ်မဲ့ ၀င်ရောက်လာပါတော့တယ်။ ကြည်နူးအားရစရာများကို ချုပ်တည်းဆုပ်ကိုင် မထားနိုင်တော့ပါ။ ဒါဟာ သဘာဝကျပြီး တရားနည်းလမ်းတကျ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ပေါက်ကွဲပြည့်လျှမ်းလာခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါသည်ပင် ငြိမ်းချမ်းရေးပါပဲ။ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ခံစားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားကို ခံစားမိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အမှန်သစ္စာကို ရယူသုံးဆောင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အကျွ်နုပ်တို့ဟာ အသက်ရှင်နေထိုင်သမျှ ကာလပတ်လုံး အကောင်းများကို ခံစားသုံးဆောင်ဖို့ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးမှုများကို သတိပြုခံစားမိဖို့ လွမ်းဆွတ်တမ်းတမှုများက အစဉ်ထာဝရ ရှိနေဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေ ရှိနေသမျှ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး အဲဒီအရာတွေကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖို့ မြေတောင်မြှောက်ပေးဖို့ကလည်း လိုအပ်ချက်တစ်ခုအဖြစ် ရှိနေဦးမှာပါ။
ဘ၀ဟာ ခရီးတစ်ခုပါ။ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဘ၀လို့ခေါ်တဲ့ ရထားတစ်စီးထဲက ခရီးသွားများ ဖြစ်ပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ “ယခု” လို့ ခေါ်တဲ့ အခိုက်အတံ့တစ်ခုအတွင်းမှာ အသက်ရှင်နေထိုင်ကြရပါတယ်။ ဘ၀ခရီးဟာ သွားမည့်နေရာ ခရီးပန်းတိုင်မပါဘဲ အလွန်ကိုပဲ လှပသာယာပါတယ်။ ဒီဘ၀ခရီးနဲ့ပတ်သက်လို့ အကျွန်ုပ်တို့ကို သံလိုက်အိမ်မြှောင်တစ်ခုကို ပေးအပ်ပြီးပါပြီ။ အဲဒီသံလိုက်အိမ်မြှောင်ဟာ ဖြည့်ဆည်းပေးရမယ့် ကျေပွန်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးရမယ့် ပြင်းပြတဲ့အာသာဆန္ဒ, ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှု အာသာဆန္ဒကို ငြှိမ်းသတ်ပြေပျောက်စေဖို့ လမ်းစရှာဖွေရန် စတင်တဲ့ နေမှာပဲ ဘ၀ရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ခရီးကို အကျွန်ုပ်တို့ စတင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစူးစမ်းရှာဖွေမှုဟာ အထက်တန်းကျ အလွန် မြင့်မြတ်တဲ့အရာတစ်ခုပါ။
ရာစုနှစ်များစွာအတွက် လှုံ့ဆော်မှုအသံတစ်ခုကို အော်ပြောပြီးပါပြီ။ အဲဒါကတော့ “ သင် ရှာဖွေနေတဲ့အရာဟာ သင့်ရဲ့ အတွင်းမှာပါ။ သင့်ရဲ့ အမှန်သစ္စာဟာ သင့်ရဲ့အတွင်းမှာပါ။ သင့်ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ သင့်ရဲ့ အတွင်းမှာပါ။ သင့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုဟာ သင့်ရဲ့အတွင်းမှာပါ” လို့ ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှ ငြိမ်းချမ်းရေးက ကြီးထွားစည်ပင်ဖို့ ပွင့်ဖူးဝေဆာဖို့ သဲကန္တာရအတွင်းမှာ စောင့်မျော်နေတဲ့ မျိုးစေ့တစ်စေ့ကဲ့သို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အတွင်းပိုင်းမှာ ဖူးပွင့်ဝေဆာဖို့ ဒီမျိုးစေ့ကို လမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါ ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ အပြင်ပန်း အပေါ်မှာ ဖြစ်ပေါ်ဖို့ အလားအလာ ရှိသွားပါတော့တယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ငြိမ်းချမ်းရေး အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ် ပေးရပါ့မယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ငြိမ်းချမ်းရေး အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ် ပေးမှာပါလား?
Posted by Maungtinyin (မောင်တင့်ယဉ်) at Sunday, November 07, 2010
ခွင့်လွှတ်ခြင်းသည် အမျက်ဒေါသကို ထိန်းချုပ်ဟန့်တားရန...
သင်ရဲ့အတွင်း မာရ်နတ်ကို တွန်းလှန်ပယ်ရှားပါ
ခွင့်လွှတ်ပါ။ ပြီးယင် ပန်းများရဲ့ရနံ့ကို ရှုရှိုက်ပါ
သင်ကိုယ်တိုင် စီစဉ်ခဲ့တဲ့ ကတိပေးပြီးတဲ့အလုပ်ကို သင...
ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိသော ခွင့်လွှတ်ခြင်းသည် ချစ်ခြင်း...
အတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိဖို့
ငြိမ်းချမ်းရေး အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ် ပေးပါ , စစ်သို့ မ...
ဖြုန်းတီးမှု များပြားလေလေ အကြမ်းဖက်မှု ကြီးမားလေလေ